CorelDRAW tonga amin'ny Mac manome traikefa nahafinaritra | Famoronana an-tserasera
Ary farany tonga amin'ny Mac ny CorelDRAW; tsy natokana ho an'ny Windows fotsiny
Iza no hilaza izany amin'ny farany handeha hijery CorelDRAW amin'ny Mac izahay. Fa izany no izy, ilay programa izay tsy niasa hatrizay ho an'ny Windows, navoakan'i Corel tamin'ny kinova vaovao sy nohatsaraina amin'ny fonosana famolavolana azy: CorelDRAW Graphics Suite 2019.
Ka, ankoatry ny fitondrana fiasa vaovao ho an'ny kinova ao amin'ny Windows, CorelDRAW dia efa eo amin'ny macOS. rehetra voalohany ho an'ny mpampiasa Mac Manana an-tànany vahaolana tsara izy ireo amin'ny famoronana sy ho fitaovana ho an'ny famolavolana sary.
Ary tsy maintsy lazaina fa tamin'ny 2001 Corel dia teo amin'ny macOS, ka izao dia miverina am-pitiavana bebe kokoa miaraka amina kinova namboarina manokana ary naverin'i Corel hanolotra traikefa nahaterahana lehibe amin'ny Mac.
Raha atao teny hafa, misy resaka kinova izay mitovy amin'ny navoaka teo aloha ny Windows teo aloha. Fotoana iray manontolo hitsapana ity fitaovana ity ary afaka jerenao ao amin'ny pejin-tranonkala ao amin'ny CorelDRAW.app, na dia mihena aza ny endri-javatra, na dia misy aza izany amin'ny tranonkala rehetra.
Ny hevitr'ity kinova mihena ity ho an'ny tranonkala dia ny hoe akinova hafa an'ny rindrambaiko vector ary mba ahafahan'ny mpamorona mizara ny tetikasan'izy ireo na aiza na aiza tsy mila fampiharana na programa mitovy amin'ilay kinova lehibe kokoa ho an'ny PC sy Mac.
Ny zavatra tsara indrindra amin'izany rehetra izany dia izany Mbola hiady hatrany i Corel hanohy ho safidy matotra amin'ny Photoshop izay toa zavatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny famolavolana sary; Alohan'ny misy koa ny tolo-kevitra lehibe hafa toy ny Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Mpamorona azy sy maro hafa.
Ny sasany amin'ireo vaovao CorelDRAW kinova .app fiasa ny fahaizany manja ny sary manjavozavo amin'ny fampiasana tranonkala ary, araka ny efa nolazainay, ny fahaizana mizara tetikasa amin'ireo mpanjifa sy mpiara-miasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ary farany tonga amin'ny Mac ny CorelDRAW; tsy natokana ho an'ny Windows fotsiny
Paco D Harleyson dia hoy izy:
Mihinana inona aho sa inona?
Mamaly an'i Paco D Harleyson
Chipi barone dia hoy izy:
Fanambarana mahafinaritra! Avelao aho hitahiry izany eo amin'ny toerako manokana ho an'ny fanambarana manan-danja ...
Mamaly an'i Chipi Barone
Adidy amezcua dia hoy izy:
Valiny tamin'i Guty Amezcua
Francisco Andrade Mendez dia hoy izy:
fa Corel minono
Valiny tamin'i Francisco Andrade Méndez
Izay no nahatonga ahy nanamarika anao hahaha
Titus Blue dia hoy izy:
Ankehitriny ireo rehetra tia Corel (tsy fantatro ny iray fa fantatro fa any ivelany izy ireo) dia hahafantatra izay tsapanao miasa miaraka amin'ny Mac
Valiny tamin'i Tito Azul
Làlana amoron-dranomasina dia hoy izy:
Mpisava lalana i Corel, toa an'i Freehand ihany koa, ary zara raha nisy nampiasa azy ireo nandritra ny 15 taona mahery. Corel dia tena natao ho an'ny mpanonta ary amin'ny sasany mbola ampiasaina ihany saingy vitsy dia vitsy, toy ny hoe mampiasa Quarrck expression ianao. Mpanakanto sy mpamorona sary no niara-niasa tamin'ny Illustrator nandritra ny taona maro.
Valiny ho an'i Costa Camino
Jesus Molina Rosa dia hoy izy:
CorelDraw dia efa nanana kinova ho an'ny Mac, 11, raha tadidiko tsara ny fahatsiarovana ahy ary CHUSTA io
Valiny tamin'i Jesús Molina Rosa
Alan Samples dia hoy izy:
20 taona lasa izay dia nisy ny fotony ho an'ny Mac, mahaliana fa ratsy kokoa noho ny an'ny Windows io.
Valiny tamin'i Alan Samplikas
Alexander Galicia dia hoy izy:
Valiny tamin'i Alexander Galicia
Maki Maus dia hoy izy:
Elaela aho vao tsy maintsy nifindra monina avy tao amin'ny PC / Corel mankany Mac / Illustrstor ... Inona izao no anontaniako ny tenako, maninona?
Mamaly an'i Maki Maus
Empire, tranobe aostralianina hahitana aingam-panahy
Sary hosodoko biby manao yoga, nataon'i Bruno Pontiroli